Ciidamada badda isbahayso oo qabtay burcad-badeed - BBC Somali
Ciidamada badda isbahayso oo qabtay burcad-badeed
25 Oktoobar 2010
War saxaafadeed ka soo baxay taliska isbahaysiga ciidamada badda ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya, ayaa sheegay in markabka NATO ee USS Laboon oo ka howlgala gacanka cadmeed uu hor istaagay koox looga shakisan yahay in ay burcadbadeed yihiin.
Markabka Maraykanka, ayaa fariin ka helay doon kuwa ganacsiga ah oo sheegay in markabkooda ay rag rasaas ku soo fureen iyagoo maraya luuqa caalami ahaan lagu taliyay in maraakiibta ka gudbaan.
Markabka, USS Laboon ayaa markaa kadib goobta ku degdegaya, iyadoo markabka dagaal ee India INS Rajput oo meel ka ag dhow ilaali ka waday, uu isaguna gacan ka gaystay ka hortagga burcad badeeda.
Markii Markabka USS Laboon uu gaaray doon yar, ayaa ragii saarnaa doonta la arkayay iyagoo badda ku tuuraya waxyaabo, markaa ciidamada badda maraykankua ay dusha u fuuleen doonta waxay ka heleen waxyaabo muujinaya burcadbadeednimo.
Sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska ciidamada badda isbahaystay, waa markii labaad muddo laba maalmood ah oo burcadbadeed ay ka hortagaan maraakiibta NATO.
Koox kale oo laga hortagay
Maalintii Jimcaha, Markabka USS Laboon wuxuu kaloo ka hortagay burcadbadeed afduubi lahayd markab ganacsi oo marayay badda cadmeed.
Markii ay raggu arkeen markaba oo sheedda ka soo muuqda ayay weerarka joojiyeen oo isku dayeen in ay baxsadaan, balse waa la qabtay.
Taliyaha, Donald J Donegan, oo hogaaminaya markabka USS Laboon, wuxuu sheegay in laba doon ee burcadbadeed ee labada maalmood gudahood la qabtay ay muujinayso howsha muhiimka ah ee lagu guulaystay in laga qabto Gacanka cadmeed.
Wuxuu kaloo sheegay in maraakiibta gacansiga oo si degdeg ah oo sax ah u soo wargaliya dhacdooyinka ay wax wayn u tahay ciidamada badda, iyadoo qabashadii ugu dambaysay ee burcadbadeeda ay ku fududaatay wadashaqayn iyo xiriir dhexmaray ciidamada badda NATO iyo kuwa India ee ilaalada ku jiray.
Howlgalka ciidamada badda NATO ay ka wadaan gacanka cadmeed ee ka baxsan xeebaha Soomaaliya ayaa wuxuu socday ilaa bishii December 2008, iyadoo uu ku bilowday galbinta maraakiibka Qaramada midoobay iyo kuwa hay'adda WFP.
Howlgalka oo hadda loogu magacdaray Operation Ocean Shield wuxuu fasax u haystaa in uu socdo ilaa bisha December sanadka 2012.